#Memphis Ayaa Gashanka ku dhuftey Haddal Uu Yiri Weerer yahankii horee ManUnited Wayne Rooney | Get Latest News From Horn of Africa |
Memphis Depay ayaa jawaab kulul siiyey Wayne Rooney ka dib markii saaxiibkiisii ​​hore uu wax ka sheegay qaab ciyaareedkiisa.
Weeraryahannadan ayaa usoo dheelay Manchester United, laakiin Depay ayaa la iibiyay bishii Janaayo 2017 markii uu ku fashilmay inuu Jose Mourinho ka helo dookha koowaad ee Old Trafford.
Depay ayaa waxaa la siiyay fursado badan oo uu ka helay Louis van Gaal ka hor inta uusan Mourinho go’aansan in 24 jirkaan uu dheeri ku yahay ciyaartoyda uu isaga ubaahan yahay inuu haysto.
Rooney ayaa ammaanay Depay horaantii, laakiin qirtay isbuucaan inuu ka niyad jabay habka uu saaxiibkiisa u jecel yahay inuu mar walba isbedelo.
Depay kuma aysan qaadan wax badan inuu usoo jawaabo Rooney, isaga oo fariin soo dhigay boggiisa rasmiga ah ee bulshadda.
Sawir uu kala soo muuqday Wayne Rooney, kaasoo uu soo dhigay bogiisa bulshadda ayuu kaga hadlay isaga oo yiri: “Wayne Rooney: Mem … Miyaad ka soo qaadan kartaa jaakada madow ee caawa?
Wayne Rooney ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay qaab ciyaareedka Old Trafford mid ka mid ah sababihii uu ku guuldareystay inuu sii joogo kooxda koowaad.
“Waxa uu yimid garoonka Stoke, waxaana uu ujoogay goolka, waxaana uu ciyaaray kaliya 15 daqiiqo, sidaasi darteed van Gaal ayaa u sheegay inuu u ciyaarayo maaliyada maalinta xigta” ayuu Rooney u sheegay Daily Mail.
‘Marka, ciyaarta ka dib, waxaan dhahay’ ‘Fiiri, waxay noqoneysaa mid aad u adag. Keliya haku soo galin dhamaan waxyaalihii aad dooneysid “.
‘Ciyaarta qorraxdu waxay ka dhacday dhulka Altrincham waxaana u soo galay Rolls Royce, isagoo xiran jaakad madow iyo koofiyad yar.
Tan iyo markii aan ka tagay United, Depay ayaa dookha koowaad ka helay kooxda Lyon, waana mid ka mid ah ciyaartoyda ugu saameynta badan.
Depay ayaa dhaliyay 22 gool, xili uu caawiyey 17 kale xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay ee Lyon, waxaana uu durbadiiba banaanka ku soo galay xilli ciyaareedka cusub isagoo dhaliyay hal gool iyo caawiye.